Netizen Report: Volavolan-dalàna ao Ejypta Mety Hanakana ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2017 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Italiano, Nederlands, عربي, Deutsch, English
Nogadraina nandritra ny 900 andro mahery i Mahmoud Abu Zaid, antsoina hoe Shawkan, raha nanangom-baovao tamin'ny fanesorana ny olona nameno ny toby Raba'a el Adaweya ao Kairo ho fanohanana ny filoha voaongana Mohamed Morsi. Sary nozarain'i @Ciluna27 tao amin'ny Twitter.
Ny Netizen Report an'ny Global Voices Advocacy dia manome topi-maso iraisampirenena momba ny fanamby, fandresena, sy ny vaovao malaza momba ny zo an'aterineto manerantany.
Mandinika volavolan-dalàna [mg] mitaky amin'ireo mpiserasera media sosialy ao Ejypta mba hisoratra anarana any amin'ny manampahefam-panjakana ny parlemanta Ejypsiana raha te-hampiasa ny tranonkala media sosialy, tahaka ny Facebook sy Twitter.
Ao anatin'ny enimbolana aorian'ny fandaniana ny lalàna, tokony hisoratra anarana ao amin'ny tranonkalan'ny manampahefana miaraka amin'ny anaran'izy ireo tena izy sy ny laharan'ny karampanondrom-pireneny ireo mpiserasera vao afaka mampiasa ny tambajotra media sosialy. Raha tsy manao izany dia mety ho voasazy hatramin'ny enim-bolana an-tranomaizina na mandoa onitra. Miandry fifanakalozan-kevitra avy amin'ny komity ny mpanao lalàna ao amin'ny parlemanta sy ny komitin'ny lalàmpanorenana ny volavolan-dalàna izay efa nosoniavin'ny solombavambahoaka miisa 60 alohany hidirana amin'ny adihevitra andraisan'ny rehetra anjara.
Tamin'ny 8 May, nandefa volavolan-dalàna izay ahitana sazy henjana ho an'ireo voampanga ho manevateva Filoha sy ny manampahefana ambony ny solombavambahoaka iray hafa. Efa manameloka ny fanevatevana filoha sy andrimpanjakana ny lalàna Ejypsiana, fa na izany aza, ny volavolan-dalàna vaovao natolotra dia ahitana sazy an-tranomaizina sy lamandy henjana, hoy ireo manampahaizana momba ny lalàna ao amin'ny Ivon-toerana Tahrir misahana ny Politikan'ny Afovoany Atsinanana. Ny fankatoavana ny lalàna dia mety midika fa hiatrika sazy hatramin'ny telo taona an-tranomaizina ireo voampanga fa manevateva ny filoha.
Raha lany, dia hanenjana ny toe-draharaha ara-politika ireo lalàna ireo satria efa tandindonin-doza maharitra nandritra ny taona maro ny zo haneho hevitra malalaka sy hivory malalaka.
Ohatra iray fanta-daza ny tranga momba ilay mpaka sary malaza Mahmoud Abu Zeid (fantatra amin'ny anarana hoe Shawkan) izay nosamborina tamin'ny Aogositra 2013, raha naka ny sarin'ireo mpitandro ny filaminana Ejipsiana mampiasa hery tafahoatra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay manohitra ny fanonganam-panjakana ara-miaramila niteraka ny firodanan'ny fitondran'ny filoha voafidy Mohammed Morsi.
Efa nogadraina vonjimaika efa ho efa-taona i Shawkany, miandry ny fitsarana azy miaraka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana 700 mahery izay voasambotra tamin'izany raharaha izany. Nahemotra vao haingana ho amin'ny 20 Mey ny fitsarana noho ny tsy fahombiazan'ny manampahefan'ny fonja nitatitra ireo voampanga tany amin'ny fitsarana, hoy ny tatitry ny vondrona mpiaro zo. Mety hiatrika sazy ho faty i Shawkan araka ny hevitr'ireo vondrona mpiaro zo noho ny fiampangana azy namboamboarina, anisan'izany ny fihazonana fitaovam-piadiana, fivoriana tsy ara-dalàna, famonoana olona sy fikasana hamono olona.
Tamin'ny raharaha hafa, noafahan'ny fitsarana heloka bevava ao an-tanànan'i Giza madiodio ireo mpanao gazety Hany Salah el-Dine sy Mosad Al-Barba, izay voasambotra noho ny fanangonam-baovao nataon'izy ireo tamin'ny sit-in iray manohana an'i Morsi tao amin'ny kianja Raba'a Al-Adawiya ao Kairo. Nahenan'ny fitsarana ihany koa ny sazy azon'i Abdullah al-Fakharany, Samhi Mustafa sy Mohamed al-Adly, izay samy voasambotra tamin'io raharaha io ihany, nahena dimy taona an-tranomaizina raha 25 izany teo aloha.
Mpikatroka Toniziana natao famotorana noho ny antontan-taratasy tafaporitsaka
Tamin'ny 3 Mey, nandany [mg] enina ora tamin'ny famotorana an'i Sami Ben Gharbia, mpiara-manorina ny sehatra haino aman-jery tsy miankina Nawaat sy ny tetikasa Advocacy an'ny Global Voices ny mananampahefana Toniziana. Nohadihadiana indrindra momba ny drafitr'asa tafaporitsaka tao amin'ny fiadidian'ny Repoblika i Gharbia, antontan-taratasy nilaza ny fanohanan'ny filoha ny volavolan-dalàna mampiadihevitra izay mety hanome famotsoran-keloka ho an'ny mpandraharaha sy ny manampahefana voampanga tamin'ny kolikoly nandritra ny fitondran'ilay mpanao didy jadona taloha Zine el-Abidine Ben Ali, saingy kosa tsy maintsy mamerina izay vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izy ireo.
Navoakan'ny Nawaat tamin'ny 21 Aprily ny antonta-taratasy, izay mampiseho mazava ny paikadin'ny fiadidian'ny filoha manery ny hanohanana ny volavolan-dalàna. Tsy nety nanambara ny loharanom-baovaony i Ben Gharbia, araka ny voalazan'ny Adininy faha-11 ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny gazety ao amin'ny firenena, izay manome fiarovana ny loharanom-baovaon'ny mpanao gazety. Na izany aza, tamin'ny 9 Mey, niakatra fitsarana ambaratonga voalohany tao Tunis izy, ho vavolombelona amin'ny raharaha.
Mila mampiseho kara-panondro ve ireo mpiserasera media sosialy Shinoa vao afaka mamoaka votoaty?
Mety mila mahazo fahazoan-dalana ireo mpiserasera media sosialy Shinoa alohan'ny hanoratana sy hizarana vaovao ao amin'ny media sosialy, araka ny fitsipika vaovao navoakan'ny Biraom-baovaon'ny Vaomieram-panjakana. Ahitana fehezan-dalàna fisoratana anarana tena izy ihany koa ny fitsipika, ka mpanadihady maromaro no hitsikilo sy hanaisotra ireo tsy mitonona anarana maneho hevitra amin'ny votoaty amin'ny media sosialy. Mbola tsy mazava tsara ny fomba hanatanterahan'ny manampahefana ny fitsipika – toa hita ho sarotra tanterahina amin'ny ambaratonga izany. Tao amin'ny media sosialy, nilaza ireo mpiserasera aterineto Shinoa fa ho ampiharina amin'ny fanatsongana ny fitsipika, mba hamerana ny asa fanaovan-gazety tsy miankina sy an'ny olon-tsotra.
Ao amin'ny WeChat Mihaona? Fa tsy ao Rosia.
Tamin'ny 4 Mey, nakaton'ny mpanao fanampenam-bava federaly ao Rosia ny WeChat [mg] fampiharana fandefasan-kafatra amin'ny finday lehibe indrindra ao Shina. Araka ny filazan'ny Roskomnadzor, tsy nahavita nisoratra anarana tao amin'ny governemanta federaly amin'ny maha “mpikarakara fanapariaham-bovao” ny WeChat. Ity fanendrena ity dia anisan'ny lalàna nivoaka tamin'ny taona 2014 izay mitantana ny lisitry ny tolotra aterineto “mikarakara fampielezam-baovao” ny governemanta Rosiana ary afaka manendry azy ireo ho tompon'andraikitra amin'ny fanesorana votoaty sy manome ny tahirin'ny mpiserasera rehefa angatahan'ny manampahefana. Ankehitriny, ahitana ny tranonkala tahaka ny Vkontakte sy Odnoklassniki (tambajotra sosialy malaza indrindra ao Rosia), ny tabilaon-tsary 2ch.hk, ny mpanjifa mailaka Mail.ru sy tolotra hafa am-polony ireo lisitra ireo.
Nodidian'ny Fitsarana Tiorka hiala amin'ny aterineto ny Wikipedia
Nandidy ny fanakatonana ny Wikipedia ao Torkia ny fitsarana Tiorka rehefa tsy nety nanaisotra ireo pejy amin'ny teny Anglisy roa ireo mpitantana ny tranonkala, pejy nilaza fa nanome lalana tamin'ny fanohanana ny jihadista ao Syria i Torkia. Araka ny nolazain'ny Minisiteran'ny Fitaterana sy ny raharaha An-dranomasina ary ny Fifandraisana, nakatona ny tranonkala noho izy “lasa loharanom-baovao miara-miasa amin'ny vondrona mitarika fanentanana mamely an'i Torkia eo amin'ny sehatra politika”. Sambany ny firenena no nanakatona tranonkala tanteraka, manatevin-daharana an'i Shina ho iray amin'ireo firenena vitsy manerantany nanakatona manontolo ny Wikipedia.
Tsy afaka nijanona nitsikilo ny Fanjakana Mitambatra
Ao anatin'ny ‘fifampidinihana voakendry‘ ny Fanjakana Mitambatra eo amin'ny fampitomboana ny fahefan'ny fanarahamaso, izay manery ireo mpamatsy tolotra aterineto hanaramaso ara-potoana ny fifandraisana sy hametraka backdoor (varavarana ambadika) mba hamakiana ny fanafenan-tsoratra, araka ny antontan-taratasy tafaporitsaka tamin'ity herinandro ity. Nidinika tamin'ireo orinasan'ny fifandraisandavitra sy ny sampan-draharahan'ny fitsikilovana mikasika ny tetikasa ny governemanta, fa tsy tamin'ny orinasan'ny teknolojia hafa na tamin'ny firaisamonim-pirenena. Na dia izany aza, misokatra hatramin'ny 19 Mey ny fifampidinihana ary mety ho alefa any amin'ny Biraon'ny Atitany ny valinteny avy amin'ny vahoaka.
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle sy Sarah Myers West no niara nanatontosa ity lahatsoratra ity.